धन को राज्य | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! धन को राज्य | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
आफ्नो बचाउको लागि प्रत्येक अन्य लड्न शत्रुहरू हुन् भनेर दुई राज्यहरू; एक महान राजा र आफ्नो नागरिक र अर्को एक असभ्य शान्ति नष्ट गर्ने प्रयास. धन को राज्य एक पाँच रील छ अन्तमा अनलाइन खेल जस्तै कथामा आधारित. पृष्ठभूमिमा आफ्नो महल को शीर्ष मा आफ्नो झण्डा संग दुई राज्यहरू छन्. रानी र असभ्य शीर्ष मा उनको सम्बन्धित राज्यहरू को टावर खडा छन्. आदिवासीहरूले काठ निर्माण आफ्नो महल छन्, जबकि राजा आफ्नो राज्य पत्थर र boulders संग बलियो छ. जबकि रील स्पिन र चरा भनेर chirping को ध्वनि प्रकृति को निर्मल वातावरण चित्रण गरिएको एक अद्भुत संगीत ट्रयाक छ. यो स्लट मा सट्टेबाजी सीमा £ 0.50 र £ 250 प्रति स्पिन बीच छ.
यो धनी अन्तमा अनलाइन खेल ब्लू छापा गेमिङ कम्पनी द्वारा विकसित भएको थियो. तिनीहरूले संसारमा शीर्ष सब अनलाइन क्यासिनो विकासकर्ताहरूले को एक हो. तिनीहरूले कुनै पनि मोबाइल वा कम्प्युटर प्रणाली प्ले गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न विभाग देखि स्लट सयौं र अन्य खेल छ.
यस अन्तमा अनलाइन, त्यहाँ यस्तो खेल लोगो केही रोचक प्रतीक हो, सुँगुर hammers संग ढाल सामना, एक विशाल ढाल र सुन ढाल र तरवार संग शाही प्रतीक संग सम्झौता. 10 कार्ड खेल्दै देखि एक कम तिर्ने प्रतीक हो. लोगो को उच्चतम दिन्छिन् 500 पटक सक्रिय payline आफ्नो तिनीहरूलाई पाँच मा खम्बा. बोनस प्रतीक सुनको पन्जा छन्, रानी, भिक्षु र असभ्य.
जंगली प्रतीक: सुनको पन्जा जंगली छ र यो खेल को सबै आधार प्रतीक लागि विकल्प. एक प्रकारको पाँच पनि दिन्छ 1000 पटक आफ्नो खम्बा.
सिंहासन स्थितिदेखाउनुहोस्: त्यहाँ तीन सिंहासन स्थितिहरू रील एक को बीचमा ठाउँ हुन्, तीन र पाँच. यी स्थितिहरू कुनै पनि तीन समान प्रतीक तपाईँलाई नि: शुल्क स्पिन अवार्ड. यदि रानी को प्रतीक, को thrones मध्ये भिक्षु वा असभ्य फल्स, एक पक्ष रील स्लट खुला छ. जहाँ तपाईं ठूलो जित्न सक्छौं यी thrones मा सबै तीन बोनस प्रतीक युद्धमा बोनस अनलक.
युद्धमा बोनस खेल: यस अन्तमा अनलाइन खेल, के तपाईं छनोट गर्न आवश्यक केही सुनको ढाल प्राप्त हुनेछ. तपाईं रानी छनोट भने, असभ्य वा भिक्षु प्रतीक त्यसपछि अनुरूप रील स्पिन हुनेछ. तपाईं X2 संग प्रतीक छनोट भने आफ्नो जीत गुणन छन् 2. तर तपाईं आत्मसमर्पण छनोट भने, त्यसपछि युद्धमा समाप्त.
सारांश:यो एक अद्वितीय छ अन्तमा अनलाइन तीन पक्ष रील सुविधाहरू तपाईंलाई मदत गर्ने विशाल stakes जीत. ग्राफिक्स र एनिमेसन साँच्चै उच्च गुणस्तरीय ध्वनि र तस्बिर संग Entertaining छन्.